Indlu encinci yasemaphandleni kufuphi ne-Darling Nature Conservancy - I-Airbnb
Indlu encinci yasemaphandleni kufuphi ne-Darling Nature Conservancy
Carpio, North Dakota, United States
Indlu yamaplanga entle kwisitrato esihle, sabucala nesithuleyo.. Yonke into oyifunayo. Umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla osemgangathweni. Indawo epholileyo. Malunga nemizuzu eyi-25 xa uhamba ngemoto usiya eMinot apho kukho iindawo ezintle zokutya nokuthenga. Iikhilomitha eziyi-5 ukuya kwiLake Darling Nature Conservancy. Ukuqhuba isiqingatha seyure ukusuka kwiDes Lacs National Wildlife Refugeenic Backway kunye neGoosefest eKenmare. Iintlobo ezingaphezu kwe-250 zeentaka, ezinjenge-raptors kunye ne-waterfowl. Ubuhle bendalo obuninzi.
Ikhitshi elinento yonke oyifunayo ukuze ulungiselele ukutya. Igumbi lokuhlala elitofotofo kunye negumbi lokulala elinebhedi etofotofo kakhulu. Umatshini wokuhlamba nowokomisa impahla osemgangathweni. Indawo eninzi yokubeka ishelufa kwigumbi lokuhlambela.
24" HDTV ene-I-Roku
Ipholile kakhulu. Kukho umlambo kufutshane kunye necawa yaseMyanmar ecaleni kwendlela. Uloliwe ufika kwiindawo ezikufutshane izihlandlo ezimbalwa ngosuku. Le iza kuba yindawo entle yokutyibilika ekhephini!
Ndikhetha ukunika iindwendwe zam indawo. Ndiyakuvuyela ukunxibelelana nawe ngomyalezo okanye nge-imeyile. Nangona umyalezo mhlawumbi ungcono